Ho renivohitra mamin’ny olona i Mahajanga! | Région Boeny
Tianay i Mahajanga ka tsy maintsy ataonay ho lasa Renivohitra mamin’ny olona! Hoy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ny Alatsinainy 22 desambra 2014, raha nitanisa ireo foto-drafitr’asa maromaro, notokanany sy vao ho atomboka eto Mahajanga ny tenany.
Fitokanana trano sekoly iray avy amin’ny ny fikambanana tsy miankina Ecoles du Monde tao Besely, Mahajanga II, no nanombohan’ny Filoha ny fitsidihana an’i Boeny rehefa avy nanokatra ny taom-pambolen-kazo 2014-2015 tany Mampikony, Faritra Sofia izy ny marainan’ny Alatsinainy 22 desambra. 18 taona nanaovana asa soa teto Madagasikara ny Ecoles du Monde ary faha-14 n’ny sekoly naoriny teto Mahajanga ny ao Besely, ahitana efitra fito, ho fianarana sy birao ary fonenan’ny mpanabe. Notoloran’ny Fanjakana malagasy mari-boninahitra Atoa Gassot, talen’ny jeneralin’ny Ecoles du Monde nandritra ny lanonana fitokanana.
Fametrahana vatofehizoro roa teto an-tampon-tanànan’i Mahajanga no fandaharam-potoanan’ny Filoha ny hariva. Ny voalohany dia ny Kianja mitafo vaovao manaraka ny toetr’andro izay haorina eo amin’ny tokontaniben’ny Sampandraharahan’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena eto Boeny. Ny faharoa dia làlana mirefy 1500m mamakivaky ny Fokontanin’i Manjarisoa, izay efa simba tokoa ary sambany nojeren’ny fitondram-panjakana fara-tampony toy izao hoy ny Sefo Fokontany nankasitraka.
Taorian’izay dia arabe lehibe telo mamakivaky ny afovoan-tanàn’i Mahajanga no notokanan’ny Filoha. Ny arabe Jeneraly De Gaulle Mahabibo misy ny bazary, ny araben’ny Eglizy mihazo an’i Tsaramandroso ary ny araben’ny 14 Oktobra mihazo ny bazarin’i Marolaka, mandalo ny fiantsoanan’ireo zotra rezionaly.
Tsiahivina fa nandritra ny dimy taona farany izay, dia efa nanomboka nahitana fitohanan’ny fiara sy fangaronam-paosy teny amin’ireo arabe ireo vokatry ny fahatereny sy faharatsian’ny làlana ary ny fahamaroan’ireo mpivarotra amoron-dàlana. Nasiam-panamboarana sy nitarina izy telo ireo ka afaka miara-mizotra tsiroaroa ny fiara amin’ny an-daniny sy an-kilan’ny arabe, sarahan’ny zaridaina vaovao mitoman-davana eo afovoany.
Ny orin’asa Colas avokoa no manatanteraka ireo asa vaventy raha orin’asa malagasy avy eto an-toerana no manao ny fanadiovana ny lakan-drano sy ny zaridaina. Ny Fanjakana Malagasy kosa no namatsy vola amin’ny alàlan’ny Ministeram-panjakana misahana ny Foto-drafitr’asa sy ny Fampitaovana ary ny Fanajariana ny Tany, sy ny Ministeran’ny Asa vaventy.
Efa-bolana lasa izay no nitenanay fa ho hatsaraina i Mahajanga, hoy ny Filoha nandritra ny kabariny teo Mahabibo. Ka natomboka tamin’ny làlana sy ny famelomana ireo zaridaina mba ho voatana ilay maha-tanànam-bononinkazo azy. Tontosa izany ankehitriny ary mbola tsy hijanona eo ny asa fanatsarana, satria tianay i Mahajanga ka tsy maintsy ataonay ho lasa Renivohitra mamin’ny olona! Hoy ihany izy.
Fanohizana ny fanamboaran-dàlana ao Antanimasaja, fanarenana ny Seranan-tsambon’i Mahajanga ary fanokafana ireo orin’asa nampalaza an’i Boeny toy ny fanaovana simenitra ao Amboanio, sy ny fanamboaran-damba Sotema taloha. Ireo indray no tohin’ny fanatsarana nampanantenainy ny vahoakan’i Boeny teo am-pamaranana. Ankilan’izay nampatsiahiviny ihany koa fandehanan’ny asa fanarenana ny tetezan’i Betsiboka sy Kamoro amin’ny lalam-pirenena faha-4.